China Home Workout Varairidzi Kusimba Muviri Musuru Roller masaja tsvimbo YeMhasuru Relax Uye Pain Relief Mugadziri uye Mutengesi | NQ
1) YAKAKONZESWA FOAM ROLLER MUSCLE MASSAGE STICK: ine yakasimba chimiro ichiita kuti igare. Iyo roller inotakura inotsvedza uye inogara.
3) YAKO YEMAHARA YEMAHARA THERAPIST: Iyo roller roller inokubatsira kuti uzorodze maronda uye akasimba mhasuru.
4) LIGHTWEIGHT & COMPACT: Yakatetepa asi ine simba, enda kumitambo yekurovedza muviri, shandisa pamba kana pamitambo yemitambo nezvimwe, inokwana zvakakwana muhombodo yako
- Chigadzirwa chacho chinogona kunongedza mapikisi ekumanikidza kusimudzira kudzikama uye kusimudzira kutenderera kwekukurumidza kupora.
-Iyo spiked nodules inogona kupa yakadzika matissue ekunyaradza uye kurapwa kwemhasuru kurwadziwa uye kusuruvara.
- Iyo yakakwana kune vamhanyi uye vatambi vanodzoreredza kubva mukukuvara kwakanangana nemitambo kana materu anobatsira kumanikidza uye kutambanudza mhasuru uye kudzikisira poindi.
Ergonomic dhizaini yematatu-epadiki masaja inoyerera, chaiyo yekusimudzira poindi,
Yakakora simbi chubhu, yakasimba inotakura simba, isiri nyore kuumbika, anti-slip mubato, dhizaini dhizaini, inzwa wakasununguka kubata
Hard bhora 360 dhigirii mupumburu wakatsetseka, nyore kushandisa
Tsvimbo yega yega yeFoam yakazara nebhegi repurasitiki, 50 pcs / ctn.
tsika kurongedza inowanikwa.
Tine timu yehunyanzvi, dhipatimendi rekutengesa, dhipatimendi rekuongorora, yakakwana nzira yekugadzira inogona kukupa iwe sevhisi yakakwana kwazvo.Ungavimba zvigadzirwa zvedu kuti zvitsigire hutano hwako hwakanaka uye hutano. Zvigadzirwa zvedu zvinozivikanwa zvakanyanya uye zvinovimbwa nevashandisi uye zvinogona kusangana nekuenderera zvichichinja zvehupfumi uye zvemagariro zvinodiwa.
Pamwe chete needu epamberi ekugadzira uye akasimba mhando manejimendi masisitimu, kuzvipira kwedu kunehunhu kunovimbisa kuti isu tinopa vatengi vedu zvigadzirwa izvo kunyangwe munhu akasarura zvakanyanya munhu angadade kuve nazvo.
Kana iwe uchifarira chero zvigadzirwa zvedu kana uchida kukurukura yetsika odha, ndapota inzwa wakasununguka kuti utaure nesu .Tiri kutarisira kuumba rakabudirira bhizinesi hukama nevatengi vatsva pasirese munguva pfupi iri kutevera.
Pashure: Fekitori inopa yakananga latex yakatambanudza jimeti simba kurwisa kusimba bhendi Latex dhonza kumusoro kubatsira bhendi
Zvadaro: Wholesale Latex 11 PCS Resistance Tube Bhendi Set Yoga Equipment Factory Kudzidzisa Bhendi China Mutengesi
Muviri Muscle Roller
Tsandanyama Relax massage stick
Kupisa nemishonga Anti kuneta PVC ndangariro furo PVC ...